September 30, 2020 Cele Family
စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဖိုးချစ်ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့အသင်းအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလအခက်အခဲတွေကြောင့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိခ် ဘောလုံးအသင်းတွေထဲက နှစ်သင်းကတော့ ပထမရာသီအပြီးမှာပဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်တာကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဖိုးချစ်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘောလုံးဝါသနာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမက မြန်မာ့ဘောလုံးလောကကို တိုးတက်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းကို တည်ထောင်ထားပေမယ့်လည်း လတ်တလောကိုဗစ်ကာလမှာ အသင်းရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲနေတာကြောင့် ဦးဇော်ဇော်က လှူဒါန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။
“Covid-19 ကာလတွင် အခက်အခဲရှိသော စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းအား Max Energy မှ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် ကူညီပေးပါသောကြောင့် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့်တကွ Max Energy မိသားစုအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင် အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ…. ဆထက်ထမ်းပိုး အများအကျိုးရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေ…. ကျေးဇူး ဦးဇော်” ဆိုပြီး ဦးဇော်ဇော်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဦးဇော်ဇော်ကတော့ မြန်မာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဌတစ်ယောက်ဖြစ်သလို မြန်မာ့ဘောလုံးလောကရဲ့အရေးကိစ္စမှန်သမျှကို လူအား၊ငွေအားစိုက်ထုတ်ပြီး တာဝန်ယူကူညီပေးလေ့ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ ဘောလုံးလောကအတွက်သာမက လတ်တလော ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်လည်း ဧရာဝတီစင်တာကို တည်ထောင်ကာ အင်တိုက်အားတိုက်ကူညီပေးနေသူ ဦးဇော်ဇော်ကတော့ တကယ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအရေးအတွက် ထောင့်စိအောင် စဉ်းစားကူညီပေးနေသူတစ်ယောက်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ..
မွေးနေ့အလှူလေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ ဝေလာရီ
မန္တလေးမြို့တွင် COVID -19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့်လူနာ ၁ ဦး သေဆုံး
March 6, 2020 Cele Family
လူနာနံပါတ် (၃၂) ဟာ လားရှိုးရှိတည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင်တည်းကာ ရွှေမန္တလာကားစီးပြန်လာခဲ့ကြောင်းသိရ